multilayer optical coating စက်၏နည်းပညာဆိုင်ရာသတ်မှတ်ချက်စာရင်း
၁၀၅၀ × ၁၂၅၀, 304 အစွန်းခံသံမဏိ.
၈၀၀ × ၁၀၀၀
၉၀၀ × ၁၀၅၀
၁၂၀၀ × ၁၂၅၀
တပ်ဆင်ထားသောကွင်းသည်မြေပြင်အထက် ၁၆၈၀ မီလီမီတာရှိသည်, ergonomic operation အမြင့်အတွက်သင့်တော်သည်.
တပ်ဆင်ထားသောကွင်းသည်မြေပြင်အထက် ၁၄၆၈ မီလီမီတာရှိသည်, ergonomic operation အမြင့်အတွက်သင့်တော်သည်.
တပ်ဆင်ထားသောကွင်းသည်မြေပြင်အထက် ၁၅၁၀ မီလီမီတာရှိသည်, ergonomic operation အမြင့်အတွက်သင့်တော်သည်.
1.ခုံးတစ်ခုတည်း workpiece disc ကို, ဖောက်သည်များနှင့်တွေ့ဆုံရန်’ လှည့်ပတ်မှု 5-30r/min, stepless မြန်နှုန်းအပြောင်းအလဲ.
2.သုံးခုံးသုံး workpiece disc, ဂြိုဟ်တုတော်လှန်ရေးနှင့်လည်ပတ်မှု, ထုတ်လုပ်မှုစွမ်းရည်အတွက်သုံးစွဲသူများ၏လိုအပ်ချက်များကိုဖြည့်ဆည်းရန်အလှည့်အပြောင်း ၅-၃၀r/မိနစ်, stepless မြန်နှုန်းအပြောင်းအလဲ.
လေးပိုင်းရရှိနိုင်ပါသည်, bracket ၏ထောင့်ကိုချိန်ညှိနိုင်သည်, တစ်ညီတစ်ညွတ်တည်း ၀ ယ်လိုအား၏လိုအပ်ချက်များကိုဖြည့်ဆည်းရန် ၅/၃၀r/မိနစ်လှည့်ပါ, stepless မြန်နှုန်းအပြောင်းအလဲ.
ခုံးတစ်ခုတည်း workpiece disc ကို, ဖောက်သည်များနှင့်တွေ့ဆုံရန်’ လှည့်ပတ်မှု 5-30r/min, stepless မြန်နှုန်းအပြောင်းအလဲ.
ယူနစ်: ပျံ့နှံ့စုပ်စက် DIP-12000 (Leybold), အမြစ်စုပ်စက် ZJY-300, စက်မှုစုပ်စက် 2X-70, maintenance pump 2X-8.The ပိုက်လိုင်းသည် 304 အစွန်းခံသံမဏိ.
ယူနစ်: ပျံ့နှံ့စုပ်စက် KT-400 (Zhenhua), အမြစ်စုပ်စက် ZJY-150, စက်မှုစုပ်စက် 2X-70, ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းမှုစုပ်စက် 2X-8.
ယူနစ်: ပျံ့နှံ့စုပ်စက် KT-600 (Zhenhua), အမြစ်စုပ်စက် ZJY-600, စက်မှုစုပ်စက် 2X-70, ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းမှုစုပ်စက် 2X-8.
ယူနစ်: ပျံ့နှံ့စုပ်စက် KT-800 (Zhenhua), အမြစ်စုပ်စက် ZJY-600, စက်မှုစုပ်စက် 2X-70, ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းမှုစုပ်စက် 2X-8.
အဆုံးစွန်ဆုံးလေဟာနယ်:4× 10-4 Pa ထက်သာလွန်သည်.
တုန်လှုပ်မှုတိုက်ဖျက်ရေးကိရိယာတပ်ဆင်ထားသည်, safety interlock ဒီဇိုင်း, manual နှင့်အလိုအလျောက်ရွေးချယ်နိုင်သည်.
အပူပြွန်တွင်အပူပေးနည်းလမ်း, PID ထိန်းချုပ်မှု, အများဆုံး 350 ℃± 1.5 ℃.
Vacuum ionization ဗုံးကြဲခြင်း
DC 3KV ဖြစ်သည်, 06KW rod cathode ဖြစ်သည် (အပေါ်ယံကိုမသုတ်မီလက်ရာကိုသန့်ရှင်းရန်သုံးသည်).
1. TELEMARK-270 °အီလက်ထရွန်သေနတ် (တင်သွင်းသည်), 6KW, မြင့်မားသောဗို့အား 4KV-10KV ချိန်ညှိနိုင်သည်, တြိဂံလှိုင်း scan, မြို့ပတ်ရထား scan, ခရုပတ်စကင်, မြင့်မားသောတည်နေရာတိကျမှု, scanning reproducibility ကောင်းကောင်းလုပ်နိုင်ပါတယ်.
2. အိမ်သုံးအီလက်ထရွန်သေနတ် (Zhenhua): 6KW, high voltage 4KV ～ 8KV ချိန်ညှိနိုင်သည်, တြိဂံလှိုင်းကိုရွေးချယ်နိုင်သည်, sine လှိုင်း, square wave ကိုလွတ်လွတ်လပ်လပ်စကင်ဖတ်နိုင်သည်.
3. Crucible: ခြောက်ပေါက်-Φ၃၈ × ၂၀ တုတ်ချောင်း (သို့) လေးပေါက် Φ၃၈ × ၂၀ အပေါင်းအလယ်ဗဟိုအလျားရှိပြီး၊ 87 (အရည်ပျော်အမှတ်နိမ့်အရည်ပျော်အငွေ့ပျံပစ္စည်းများမြင့်မားစွာသုံးသည်) သို့မဟုတ်လေးချောင်းပေါက်Φ48× 18 တုတ်ချောင်း.
1. RF (ရေဒီယိုကြိမ်နှုန်း) အိုင်းရင်းမြစ် (တင်သွင်းသည်).
2. 5KVA ခန်းမအိုင်းရင်းမြစ် (Zhenhua မှထုတ်လုပ်သည်), electroplating လုပ်ငန်းစဉ်တွင် electroplating (သို့) အရန် plating မပြုလုပ်မီသန့်ရှင်းရေးအတွက်သုံးသည်, ရုပ်ရှင်၏ refractive index ကိုတိုးတက်စေရန်အကျိုးရှိသည်, ခိုင်မာမှု, ရုပ်ရှင်၏သိပ်သည်းဆနှင့်အစေးကပ်မှု.
1. MDC-360 crystal controller (တင်သွင်းသည်) အလိုအလျောက်အပေါ်ယံပိုင်းအလွှာ ၁ ～ ၉၉ ကိုသိုလှောင်နိုင်သည်, 99 program data အမျိုးအစားများ, တိကျမှု 0.5%+1? error.2TELEMARK-880 crystal controller ကိုပြင်ဆင်ခဲ့သည် (တင်သွင်းသည်): အလိုအလျောက်အပေါ်ယံပိုင်းအလွှာ ၁ ～ ၉၉ ကိုသိုလှောင်နိုင်သည်, 99 အစီအစဉ်ဒေတာအမျိုးအစားများ။ 精度 0.5%+1? အမှားပြင်သည်.
3. TELEMARK-820 optical controller (တင်သွင်းသည်): multi-wavelength full-spectrum end-point analysis နည်းပညာကိုသုံးသည်, ကူးစက်မှုကိုခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာခြင်းဖြင့်ရုပ်ရှင်၏အဆုံးကိုအကဲဖြတ်ပါ (သို့မဟုတ်ရောင်ပြန်) မော်နီတာစာရွက်၏ကွေး 370-870 mm.High ထိန်းချုပ်မှုတိကျမှု, လှိုင်းအလျားတစ်ခုတည်းထိန်းချုပ်ခြင်း, အလိုအလျောက်ထိန်းချုပ်မှုနှင့်လက်စွဲထိန်းချုပ်မှုကိုလည်းသုံးနိုင်သည်, ပေါင်းစည်းမှုအဆင့်မြင့်မားသည်.
4. TELEMARK-820 optical controller နှင့် TELEMARK-880 crystal controller သည် high precision နှင့် high repeatability coating တို့လိုအပ်ချက်များနှင့်ပြည့်စုံနိုင်သည်။ အပြည့်အဝအလိုအလျောက်ထိန်းချုပ်မှုကိုနားလည်ရန် host computer နှင့်ပူးပေါင်းပါ။.
5. ပြည်တွင်း optical controller (ကဲ့သို့ 9704 လိုက်ဖက်သော monochromator, စသည်တို့), လှိုင်းအလျားကိုချိန်ညှိနိုင်သည် 330 သို့ 870, တိကျမှုသည်± 1.5nm သို့ရောက်ရှိနိုင်သည်.
သံလိုက်အခြေခံနှင့်, ၎င်းကိုလေဟာနယ်အခန်းတံခါးနှင့် control cabinet ၏မည်သည့်နေရာတွင်မဆိုထားနိုင်သည်.
နောက်တစ်ခု: magnetron sputtering နည်းပညာကိုဘယ်လိုခွဲခြားမလဲ။